उद्यमी शंकर गोल्यानका ‘कूलङ्गार छोरा’ को कालोबजारी, आधा अर्ब कुम्ल्याउने दाउ – Health Post Nepal
सुन्दर खनाल र खिलानाथ ढकाल/काठमाडाैं
२०७६ चैत २७ गते १२:५८
‘यो कूलङ्गारले किन यस्तो गर्‍यो? यसलाई नपुग्दो के थियो र?’
प्रतिष्ठित उद्यमी तथा जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष शंकर गोल्यानले कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा अत्यावश्यक सामग्रीको कालोबजारी गर्दागर्दै छोरा सुलभ अग्रवाल रंगेहात पक्राउ परेपछि प्रहरीकहाँ पुगेर भनेछन्।
‘मलाई यतिसम्म गर्ला भन्ने अनुमान थिएन। इज्जतै गयो,’ वार्षिक कारोबारबाट अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गर्ने सीमित उद्यमी–व्यापारीहरूको सानो क्लबभित्र पर्ने गोल्यानले औडाहा पोखेछन्।
यो कालोबजारी प्रकरणले मारवाडी समुदायमै यतिबेला ठूलो ‘कलंक’ फैलिरहेको महसुस भइरहेको गोल्यान परिवारका एक नातेदारले बताए। त्यसो त अग्रवालको यो कारोबारलाई लिएर मारवाडी व्यवसायीहरूको मनमा सुरूदेखि नै चिसो पसेको थियो।
‘मैले सय पिस एन–९५ मास्क मगाएँ। उनले हुन्छ भने र मूल्यको कुरा पनि गर्न आवश्यक ठानिएन। तर, सामान सँगसँगै प्रतिगोटा ९ सय मूल्य लगाएर पो इन्भ्वाइस पठाएछ। त्यसपछि मैले थर्मल गन मगाउने चेष्टा गरिनँ,’ ती नातेदारले भने, ‘अहिले खोरमै पुगेछ। त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’
झन्डै आधा अर्बको खेल
नेपाली जनता कोरोना त्रासले लकडाउनमा बसेको साता बितिरहँदा गत बिहीबार सुलभको करिब साढे आठ टन (३० हजारथान थर्मल गन र केही हजार थान एन–९५ मास्क) सामान नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाजले चीनको ग्वान्जाउबाट काठमाडौं ल्याएको थियो।
बंगलादेशी नागरिक थोमस मरेले कुपन्डोलमा अफिस राखी सञ्चालन गर्दै आएको फ्ल्यास कार्गोले चार्टर गरेको वाइडबडी जहाजमा आफ्नोमात्र सामान राखेर ल्याउन अग्रवालले विशेष ‘तिकडम’ गरेका थिए। उनले मरेसँग आफ्नोमात्र सामान राखेर काठमाडौं झार्न जहाज चार्टर चार्ज (पौने २ करोड) सहित अतिरिक्त पैसासमेत दिने ‘सेटिङ’ मिलाएका थिए।
त्यसपछि मरेले सोही कार्गो उडानबाट ल्याउन इन्भ्वाइस काटिसकेका, शुल्क लिइसकेका अन्य २५ व्यापारीका सामान एवं चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा सहयोगवापत पठाएका १ हजार २ सय किलो सामानसमेत ग्वान्जाउमै छाडिदिए। ती सामान फेरि अर्को कुनै कार्गो उडानबाट नेपाल भित्रिएको छैन।
आफ्नो सामान अग्रवाल र कार्गोवाला बंगालीको मिलोमतोमा नआएपछि व्यापारीहरू क्रुद्ध भएका थिए। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पठाएको सामान नआएपछि नेकपाका नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरूलाई समेत यसबारे जानकारी मिलेको थियो।
यता, काठमाडौं झरिसकेपछि अग्रवाल अब करिब आधा अर्ब कमाउने गरी अन्धाधुन्ध मूल्यमा सामान बिक्री गर्न आफैं लागिपरे।
लामो समयदेखि चीनबाट मेडिकल सामग्री ल्याएर बिक्री गर्दै आएका एक व्यापारीका अनुसार ३० हजारथान थर्मल गन र केही हजारथान एन–९५ मास्कको मूल्य काठमाडौं आइसक्दासम्म करिब ६ करोड हुन्छ। थर्मल गन ग्वान्जाउमा गोटाको २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्ममै पाइन्छ भने एन–९५ मास्क डेढ सयदेखि २ सय रुपैयाँसम्म पर्छ।
बजारमा अग्रवालले बिक्री गरेको मूल्य हेर्दा उनले आधा अर्ब कमाउने ध्येय राखेको ती व्यापारी बताउँछन्। उनले थर्मल गन प्रतिथान १६ हजार रुपैयाँ, एन–९५ मास्क ९ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म बेचेका थिए।
अग्रवालले नक्सालस्थित गोदाममा राखेका सामान आफैं आफ्नो निलो प्लेटवाला गाडी (किर्गिज गणतन्त्रको अवैतनिक दूतका रूपमा पाएको) मा राखेर बेच्दै हिँडेका थिए। चिनेजानेका मारवाडीहरूलाई चाहिँ आफ्ना सहयोगीमार्फत् पुर्‍याएका थिए। उनले सामानको डिल गर्न ९८५१०२०३६९ नम्बरको आफ्नै निजी मोबाइल प्रयोग गरेका थिए। उनले ठूला ‘डिल’ मा आफैं सामान पुर्‍याउन जाने, नगदमात्र भुक्तानी लिएको देखिन्छ।
कसरी भयो अपरेसन?
बिहीबार सामान झारेलगत्तै भोलिपल्टैदेखि अग्रवाल थर्मल गन बेच्न दौडेको देखिन्छ। साथसाथै उनी नेपाल उद्योग परिसंघको ब्यानरमा थोरै –थोरै सामान विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा दान गर्न पनि हिँडेका थिए।
अग्रवालले कालोबजारी गरिरहेको भन्ने पहिलो सूचना (फोन नम्बरसहित) आइतबार साँझ महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले पाएको हो। महाशाखाले त्यतिखेरै एसपी हृदय थापाको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली बनाएर स्टिङ अपरेसन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
थापाको टोलीले सोमबार बिहान अग्रवालको ९८५१०२०३६९ नम्बरको मोबाइलमा फोन गरी आफ्नो स्वास्थ्यसम्बन्धी एनजिओका लागि सयथान थर्मल चाहिएको र त्यसका लागि भाउ मिलाएर दिनुपर्‍यो भनी कुरा सुरू गरेको थियो। अग्रवालले १६ हजारको रेटबाट टसमस गर्न नसकिने भन्दै खासै मतलब नदेखाएजस्तो गरे।
अन्ततः टोलीले त्यसमै मन्जुरी गर्दा अग्रवालले १६ लाख रुपैयाँ नगद लिएर आउन भने। ‘१६ लाख रुपैयाँ बन्दोबस्त गर्न लाग्यौं, दुई दिन बित्यो, तर १० लाखभन्दा जुटेन। त्यसपछि बिहीबार बिहान १० लाखको मात्र सामान दिनोस् भन्यौं। यिनै अग्रवाल, अनि यति ठूलो कालोबजारी भन्ने थाहा पाएको भए अलि ठूलै हिसाबले जान्थ्यौं,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले भने।
प्रहरी टोलीलाई अग्रवालले मध्याह्न १२ बजेतिर दरबारमार्ग आउनु भने। टेकुबाट एसपी थापासहित अन्य दुईजना बोलेरो गाडीमा त्यता लागे। सेतो गाडीमा मेडिकल सिग्नल प्लस लेखिएको कपडाको तुल पनि टाँगियो। दरबारमार्ग पुगेर फोन गर्दा अग्रवालले फेरि जयनेपाल हलतिर आउनु भने। फेरि नागपोखरी आउनु भने, अन्ततः नक्साल बालमन्दिर आउनु भने, जहाँ उनको कार्यालयसमेत छ।
अग्रवालले आफ्नो निलो प्लेटको गाडी बालमन्दिरको चौरभित्र लगेर राखेका थिए, टोलीलाई त्यहीँभित्र आउन भनियो। जब अग्रवालले पैसा समातेर सामान दिन खोजे, प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्यो।
न्युरोडमा किनेको भनेर बच्ने दाउ
प्रहरीले पक्राउ गर्दैगर्दा आफू ठूलो मान्छे भनेर थर्काउन खोजेका अग्रवालले थानातिर जाने क्रममा चीनबाट सामान ल्याएका भने पनि प्रारम्भिक बयान दिने क्रममा कुरा फेरेका छन्।
‘उनी अहिले भन्दैछन् कि न्युरोडको व्यापारीबाट २ सयथान किनेको, बढी भएर बेचेको। उनी निकै बाठा छन्,’ अनुसन्धानकर्मी प्रहरी भन्छन्।
प्रहरीले अग्रवालको बालुवाटारस्थित घर र नक्सालस्थित अफिसमा छापा मार्दा पनि थर्मल गनको स्टक भेटिएको छैन। ‘अग्रवाल सजिलै भन्नेवाला छैनन्। त्यो सामान लुकाउन उनको टोली सक्रिय भइसक्यो,’ अनुसन्धानकर्मी भन्छन्।
अग्रवालले सामान लिन ठाउँ फेरिफेरी बोलाउँदा आफूले अपहरणकारीलाई स्टिङ गर्दाजस्तो अनुभव गरेको एसपी थापाले बताए। ‘यो कारोबार सिंगल ह्यान्डेड देखिन्छ। यसमा परिवारलाई समेत जानकारी भएको देखिन्नँ,’ उनले भने।
कार्गोवालालाई के हुन्छ?
अग्रवालको एकल हितमा अरूको सामान नल्याउने फ्ल्यास कार्गोमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। ‘हामी लकडाउन भएकाले यताउता भएका छौं, अब निवेदन दिन्छौं,’ पैैसा तिरेर पनि सामान नल्याएपछि कार्गोवालासँग क्रुद्ध एक व्यापारीले भने।
प्रहरीले हिजै अग्रवाललाई सात दिनको म्याद थपाई न्यायिक हिरासतमा राखिसकेको छ।
Tags: कालोबजारी, काेराेनाभाइरस, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९), थर्मल गन, सुलभ अग्रवाल